ကြည့်မိတဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား ၊ ၀တ်တဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကြည့်မိတဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား ၊ ၀တ်တဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား…
ကြည့်မိတဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား ၊ ၀တ်တဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား…
Posted by lu ta lone on Apr 29, 2010 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., Literature/Books, Myanma News, News, Other - Non Channelized | 26 comments
လူတလုံး အာဘော်... မြန်မာမလေးတွေရဲ့ အမျိုးသားဝတ်စုံ... ကြည့်မိတဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား ၊ ၀တ်တဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား...
အမေပြောခဲ့တာက ဒီလိုပါ – မြန်မာမတွေရဲ့ အမျိုသားဝတ်စုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ အမျိုးသားဝတ်စုံရယ်လို့ ရှိချင်သေးလား။ မရှိရင်လည်း ရတာပါပဲလို့ အောက်မေ့နေကြသလား။ ရှိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ထစ်ဆုံး ထဘီတော့ ၀တ်စုံအဖြစ်သတ်မှတ်ရဦးမှာပါပဲ။ ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးများကို ကြည့်လိုက်ရင် ဆာရီဟာ သူတို့အမျိုးသားဝတ်စုံပါပဲ။
အပေါ်ပိုင်းကျပြန်တော့လည်း ရင်ညွန့်အထက် ဘာမှ မရှိဘူး။ အမေတို့ရှေးတုန်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ ရင်လျားကြီးနဲ့ လူထဲမထွက်ရဲကြပါဘူး။ ခုတော့ရင်လျားထားတဲ့အတိုင်း အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ လက်သန်းတခြမ်းလောက် ကြိုးလေးတွေသာ ပခုံးမှာချိတ်လို့ လူမြင်ကွင်းမှာ သွားနေလာနေကြတာ မသင့်လျှော်လွန်းပါဘူးကွယ်။ ဟိုး ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကတည်းက “အရှက်ကို အသက်နဲ့လဲမယ် ´´ ဆိုပြီး အမေတို့မြန်မာမိန်းမတွေ ကြွေးကျော်ခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်။ အရှက်ကို အသက်ထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့စကားပါ။ ဒါကြောင့် သမီးလေးတို့ကရော သမီးလေးတို့ရဲ့ အုပ်ထိန်းသူတွေကပါ ၀ိုင်းဝန်းတည့်မတ်ပေးကြပါ။
ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေရဲ့အမြင်က အမေတို့နဲ့ တော်တော်ကို ကွာဟနေတယ်။ ဥပမာဆိုပါတော့ အမေတို့တသက်လုံးလက်ခံလာတာက `ချက်´ဆိုတာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖော်လှစ်အပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ လုံလုံခြုံခြုံ ဖုံးကွယ်ထားရမဲ့အရာမျိုး။ အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေက ဒီချက်ကြီးကို ဖော်ရုံလှစ်ရုံမကဘူး ရွှေငွေရတနာများ ဆင်ယင်သေးသတဲ့။ အံ့သြလို့မဆုံးဘူး။ သူတို့အဖေတွေကလည်း ဒါကိုကြည့်နေကြသတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ခေတ်ကြီးကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား လူတွေကဲလာရဲလာတာကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား ၊ အမေအသက်၇ှည်နေသေးတာကိုပဲအပြစ်တင်ရမလား မပြောတတ်တော့ဘူး။
အခုတော့ အမေလဲ မရှိတော့ပါဘူး… အမေ မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့…
သည်လိုခေတ်ပျက်ကြီးမှာ ကျနော်တို.လူဖြစ်နေတာကို ကမှားနေတာပါ။
ခေတ်နဲ့ အညီဝတ်တာကို လက်သင့်ခံနိုင်ပေမယ့် အရမ်းကြီး ခေတ်လွန်နေရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ရှင်။ ကိုယ့် ယဉ်ကျေးမှူ ကိုတော့ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှူဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောပါ၊ ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှူတွေ ရှေးထုံးတမ်းစဉ်လာတွေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံဟာ ကွယ်ပျောက်သွားနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်
ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ. ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးဆိုးရွားနေပါတယ်။Globalization ခေတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ခေတ်ပဲ ရောက်ရောက် မြန်မာ ဟာ မြန်မာပါဘဲ။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ထဲမှာ နေမှမဟုတ် ၊ သူများနိုင်ငံမှာနေထိုင်လည်း ကိုယ် ဘယ်က လာတာလည်း ဆိုတာ ကိုယ်သာလျှင် အသိဆုံးပါ
မိန်းကလေးများ သိမှာပါ အခုနေခါများ မိန်းကလေးတယောက်ထဘီနဲ့ ရင်စေ့ ၀တ်သွား၇င် အားလုံးကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့
လျှပ်ပေါ်လော်လီ ၀တ်သွားရင်ကြည့်တဲ့ နဲ့ အာလုံးကြည့်တာချင်းအတူတူ ကြည့်တဲ့အကြည့်ချင်းကမတူဘူးနော်
” အရိုးဆုံးအရာက အဆန်းဆုံးဖြစ်နေတယ် ” ကျွန်တော့အမြင်မှာ ။ လူကြီးသူမတွေကအစ ချွေးမတော်ချင်ကြမှာဘဲ
ကန်တော့နော် ကျွန်တော့အစ်မတွေ ညီမတွေကို
၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သတ်လာတော့comment ပေးတဲ့ သူတွေတော်တော်နဲတာပဲနော် အဟဲဟဲ.
စာရေးသူနဲ့ စာဖတ်သူတွေကအမြင်ချင်းမတူလို့ ပဲဖြစ်ရမယ် :D.
ဒီလိုအသိပညာပေးစာလေးတွေများများရေးပေးစေချင်တယ်.ကိုယ်ပဗမာဆိုတာမေ့ကုန်ကြပြီလားမသိတော့ဘူး..ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ရင်မောတယ်.သူတို့ ကိုယ်သူတို့ အဟုတ်ကြီးတွေမှတ်နေတာ
အလန်းတွေလုပ်ချင်အားကြီးပြီးတော့အလန်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ.ယောက်ျားမရမှာစို့ လို့ ထင်တယ်
ရှ်ိတာတွေအကုန်လှန်ပြနေကြတော့ တာပဲ. ကိုယ်တုံးလုံးစိန်တွေ ရွံတယ်နော် ထွီ …ဝေါ့ .
၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေက ခုနောက်ပိုင်း ၃-၄ နှစ်အတွင်းမှာ သိသိသာကြီးကို ပြောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ နောက် ၃-၄နှစ်ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေ ထဘီလုံးဝမ၀တ်လောက်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ အမျိုးသားတွေလဲ ပုဆိုးနဲ့ ဝေးလာတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ နောက်ဆိုရင် အမျိုးသားဝတ်စုံဆိုတာ ပြတိုက်မှာ သွားကြည့်ရတော့မယ်ထင်တယ်။ မြစ်တွေတောင် ရေစီးကြောင်းပြောင်းသေးတာဆိုတော့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း ပြောင်းတာကိုလဲ လက်မခံလို့တော့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အ၀တ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့ ခေတ်ရှေ့ပြေးပြီး ခေတ်လွန်နေတာကိုတော့ လက်ခံလို့မရနိုင်သေးဘူး။ တချို့လဲ မိဘကိုယ်တိုင်ဝတ်ခိုင်းတာဖြစ်မယ်၊ တချို့ကြ မိဘမသိအောင် ၀တ်တာ။ အိမ်ကထွက်လာတော့ တမျိုး၊ တနေရာမှာ သွားပြီး ၀တ်ချင်သလိုဝတ်၊ ကဲချင်သလိုကဲပြီး အိမ်ပြန်ဝင်တော့ တမျိုး။ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတာဆိုတော့ မိဘကလည်း မသိရှာဘူးပေါ့။ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ် အဲလို တန်ဖိုးထားရမည့်ဟာတွေကို လှစ်ပြပြီး ၀တ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုတော့ လေးစားမှု နဲနဲလျော့သွားသလို ခံစားရပါကြောင်း။
ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်မှာ ပဲ… ကြည့်ဖို့ကို မျက်လုံးတွေပေးထားတယ်လေ…
ဝတ်တဲ့ သူတွေကလဲ ဝတ်ကြပေါ့….ဝတ်ချင်တာကိုဝတ်ဖို့ သူမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်……လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တိုင်းလဲ လူကိုယ်တိုင်က လျှပ်ပေါ်လော်လီဦးမှပါ…. ရိုးရိုးလေးနေပြပြီးလုပ်ချင်တာလုပ်နေသူတွေလဲ ရှိမှာပေါ့….လောကကြီးကိုက ….ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့
ပြောင်းလဲ မှုတွေကို ဖန်တီးပေးနေတယ်…….. လိုက်မပြောင်းတဲ့သူတွေကျန်ခဲ့လဲ အချိန်တန်ရင် သွားရမယ့်လမ်းက အဆင်သင့်ပါ..
ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးခေတ်နဲ့ အညီလိုက်နေတော့ကော … အချိန်တန်ရင်သွားရမယ့်လမ်းက အဆင်သင့်ပါပဲ……..
တကယ်တော့ ဘဝဆိုတာ…..မသိလိုက်မသိဖာသာ ထားလိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးလို့ထင်တယ်….. …..ကျွန်တော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြချင်တယ်…
ဟမ်ဘာဂါ ဆိုတာကို စားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်….အခုခေတ်လူတော်တော်များများသိနေကြပါတယ်….ကျွန်တော့်အဖွား(သေသွားပြီ) ဆိုရင် တစ်ခါပဲစားဖူးလိုက်ပါတယ်… ဒါတောင်ကျွန်တော်ဝယ်ကြွေးခဲ့လို့ပါ ….သူကပြောသွားတယ်…ဒါလားဟဲ့ဟမ်ဘာဂါတဲ့… ကျွန်တော်မမြင်ဖူးလိုက်တဲ့ အဖွားအမေဆို၇င်
သူသမီးစားဖူးတဲ့ ဟမ်ဘာဂါဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး….. …… ဒါဟာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ခေတ်ပညာ ခေတ်စနစ် ခေတ်အတွေးအခေါ်ပေါ့…..
ငါမသိ ငါမမြင် ငါမယုံ ဆိုတာမဖြစ်သင့်သလို ….. လူတိုင်းမှာ သူ့အသိ သူ့အမြင် သူ့ယုံကြည်မှု ဆိုတာ ရှိကြမှာပေါ့ …….
သူတို့ဖာသာ သူတို့နားလည်နိုင်စွမ်းကို သာ အသုံးချနိုင်ကြပါစေ…….
ဘယ်သူကိုမှ ရည်ရွယ်ပြောဆို ခြင်းမရှိပါ…………အမှန်ကိုနားလည်နိုင်ပါစေ…..
စေတနာဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ မတန် ….တဲ့ စကားလေးကနားလည်ရလွယ်သလိုလိုနဲ့ ခက်ပါတယ်….
ဘယ်သူ့မှာမှ အပြစ်မရှိဘူး။ ကမ်ဘာဦးက ဘယ်သူမှ ဘာမှဝတ်တာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာလည်း ရှေးက နန်တွင်းသူပဲရင်စည်းဝတ်တာ။ သာမန်အရပ်သူတွေ ရင်လျှားနေတာပဲ။ အတွင်းမှာ ဘာမှတောင်မခံဘူး။
အဲဒီရင်စည်းဝတ်တဲ့ နန်းတွင်းမှာ မုဒိမ်းမှုတွေ နန်းတွင်းပြင်ထက်တောင် ပိုဖြစ်သေးတယ်။ မင်းနန်ပျို့ ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မင်းသားက နန်းတွင်းသူ နှို့နှိုက်တဲ့အကြောင်းပါတယ်။
ကုလားမတွေလည်း ချက်ဖေါ်ထားတာ နှစ်ထောင်ချီနေပြီ။ လောကနိတိမှာ မိန်းမကောင်းဆို နက်သောချက်ရှိရမယ်လို့တောင် ပြထားသေးတယ်။ နက်သောချက်ကို မြင်ရအောင် ချက်ကိုပြသင့်တယ်။
“လူမှာအ၀တ်၊တောင်းမှာအကွပ်” ဆိုတဲ့စကားပုံတော့ရှိနေတာပဲလေ။ နှိုင်းယှဉ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် သူ့နေရာနဲ့သူ
လိုက်ဖက်မယ့်အ၀တ်အစားတော့ ၀တ်နေကြရတာပါပဲ။ အားကစားမယ်တို့၊ ဂျွမ်းဘားမယ်တို့၊ ရေကူးမယ်တို့
…အစရှိတဲ့အဲဒီမယ်တွေဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ ကစားရတဲ့ပြိုင်ပွဲအလိုက် ၀တ်သင့်တဲ့
အ၀တ်အစားမျိုးကိုဝတ်ရသလိုပေါ့…။ရာသီဥတုအလိုက်လဲ ၀တ်ဆင်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဖက်ရှင်တွေ၊ အ၀တ်အစား
ဒီဇိုင်းတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယဉ်ပါးနေပြီးသားပဲ။ မြင်တဲ့လူရဲ့စိတ်သဘောထားပေါ်လိုက်ပြီး အချိုးချကြည့်မယ်
ဆိုရင် နောက်လာမယ့် Next Generation တွေမှာ ထမင်းစား၊ရေသောက်သလို ဖြစ်သွားမယ်ယူဆတာပဲ။
ဒီမှာက ခေတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကလဲ ရှေ့မှီနောက်မှီကွာဟချက်ကအရမ်းနီးနေလို့အမြင်စိမ်းချင်စိမ်းနိုင်တာ။
ကမ္ဘာရွာကြီးမှာတော့ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပကူးလူးဆက်သွယ်ရေး၊ လမ်းပန်းဖြောင့်ဖြူး
နေတဲ့ ခရီးဆက်သွယ်ရေး….အစရှိသဖြင့်ပေါ့…ဟိုးအရင်က..ကမ္ဘာကြီးဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတောင် အခုတော့
ရွာကြီးဖြစ်သွားပြီ….သာအေးတို့အစ်မကဒီအဆင်ဝတ်ရင် အေးကြည်မတို့ကလဲ ရွာက..ပွဲတော်ကျရင်
ဒီလိုအဆင်မျိုးဝတ်ကြည့်အုန်းမှလို့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကလဲ လွယ့်လွယ့်လေး…..
ဒီလောက်တောင် အရှက် မရှိ ရ သလားဆ်ုပြီး ..
Moe Thar says:
အ၀တ်အစားတွေကို “ထွင်” ပြီးဝတ်တယ်…. ကြာလာတော့ “ခေတ်”ဖြစ်လာတယ်……. အဲဒီခေတ်က ကြာလာတဲ့အခါမှာ “ယဉ်ကျေးမှု” ဆိုတာဖြစ်သွားတာပေါ့….. အခုလဲ တစ်ကမ္ဘာလုံး လိုလို တိုတိုနန့်နန့်လေးတွေ ၀တ်လာကြတာရယ်…. ကိုရီးယားကားတွေရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ခေတ်မီလာကြတာပေါ့….. သူတို့ခေတ်မီတော့ ကျနော်များ ပုရိသတို့အတွက် မျက်စိအပန်းဖြေစရာဖြစ်ကြတာပေါ့…… နောင် အနှစ်(၂၀)လောက်ဆိုရင် ဘယ်လိုများဖြစ်နေကြမယ်ဆိုတာ တွေးတောင် မတွေးဝံ့ပါဘူးဗျာ…. ကိုယ်တွေလဲ အိမ်ထောင်ကျရင် သမီးမိန်းခလေးများပါလာရင် ၀ဋ်လည်ဦးမှာပါလားဆိုပြီး ရင်လေးနေရပါရဲ့ဗျာ……
အမျိုးသမီးတွေက ပို ဖေါ်လာတယ်
ယဉ်ကျေးစွာလှပတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ကျွန်တော်တို့မျက်စိမှာပိုလို့ကျက်သရေရှိတာတော့အမှန်ပါဘဲ
ဒီတော့ သူတို့ကိုသေသေချာချာ နားလည်အောင်ပညာပေးရမှာပေါ့
ကျွန်တော်ကလူငယ်တစ်ယောက်ဆိုတော့လူငယ်အမြင်နဲ.ဘဲပြောချင်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေအတိုအပျက်ဝတ်တာခေတ်နဲ.အညီဝတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့ နေရာ နဲ. အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးဝတ်သင့်ပါတယ်။ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဆယ်ကျော်သက်တွေအများဆုံးရှိတဲ့ ရှိုးပွဲတစ်ခုကိုသွားရင် mini skirt ၀တ်တာကို သူ.ကိုအရှက်မရှိဘူးလို.ပြောလို.မရပါဘူး။လူတိုင်းတိုနေတဲ့အချိန်မှာ သူကထဘီ နဲ. ရင်ဖုံးနဲ.သွားရင် သူ.ကိုဝိုင်းရယ်မှာပေါ့..အဲဒီလိုဘဲ၊လူကြီးတွေနဲ.ထမင်းစားပွဲဖိတ်လို.သွားတယ်ဆိုရင်တော့လုံလုံခြုံခြုံဝတ်ရမှာပေါ.။သူ.နေရာနဲ.သူဝတ်ရင်အမြင်မရိုင်းဘူး
ကြည့်သောသူအသက်ရှည်၏ ပြသောသူကုသိုလ်ရ၏ ဆိုတဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူလိုက်.. အဟီး..
pretty woman movie ကိုကြည့် ဖူးကြသလားဗျာ တကယ်ကောင်းတယ်
ုခု လူထုဒေါ်အမာရေးထားတဲ့ စာကို နားလည်သွားမှာ စဉ်းစားတတ်ရင်ပေါ့
so nice all comments …….. လူ တစ်ရာက လူတစ်ယောက် ကို စကားတစ်ခွန်းစီပြောသလိုပဲ …. ဆိုလိုချင်းရာ မတူကြဘူး ..တူညီ တာ တစ်ခု က ကျွန်တော် တို့ .. ကိုယ့်မြေ ကို တိုးတတ် လို စိတ် ရှိကြတယ်… ဝေဖန်လည်း .. ထူးမလာနိုင်ပါဘူး …… တစ်ယောက်ချင်းစီ ပြင်ရင် ..တစ်နိုင်ငံ ..ပြောင်းလဲမှာပါ …. စိတ်လေး တော့ ညှိသင့်တယ် နော်….
There is something missing in all the comments. Do you know what? How about the respect for individual girl’s choice? It appears that everyone wants to “dictate” what Burmese girls should wear. If you believe in the idea of “dictating” what others should do, your idea is more dangerous than the clothing choice of those girls.
ခက်ပါတယ် ခေတ်ကြီးကိုအမှီလိုက်ချင်တာ လူငယ်တွေရဲ့သဘာဝပါ
အမေမာပြောသလို အမျိုးသားဝတ်စုံ သတ်မှတ်ချင်ရင် လူငယ်တွေ
သူတို့အားကျတဲ့ အဆိုတော် မင်းသား မင်းသမီး တွေကိုကြည့်ပြီးလိုက်
လူငယ်ထုကကြီးပါတယ် သူတို့ရဲ့စံပြ အားကျတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကနည်းပါ
စံပြ အသိုင်းအ၀ိုင်းကစလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
taw taw kg tat sar par ! I want to know all myanmar girls. Be Care for that case